Jobho anopindura (1-17)
Anoda kutaura nyaya yake pamberi paMwari (1-7)
Anotaura kuti ari kushaya Mwari (8, 9)
‘Ndakaramba ndichitevera nzira yake ndisingatsauki’ (11)
23 Jobho akapindura achiti: 2 “Kunyange nanhasi ndinonyunyuta chete;+Simba rangu rapera nekugomera kwandiri kuita. 3 Dai ndaiziva kunowanikwa Mwari!+ Ndaienda kwaanogara.+ 4 Ndaitaura nyaya yangu pamberi pake,Ndozadza muromo wangu nemashoko ekumupindura; 5 Ndaidzidza mapinduriro aanondiita,Ndobata zvaanondiudza. 6 Angapikisana neni achishandisa simba rake guru here? Aiwa, haangambotadza kunzwa nyaya yangu.+ 7 Ikoko munhu akarurama anogona kutongerwa nyaya yake,Uye ndaizobva kuMutongi wangu ndasunungurwa pamhosva zvachose. 8 Asi ndikaenda kumabvazuva, haako;Uye ndikadzoka, handimuwani. 9 Paanenge achishanda ari kuruboshwe, handigoni kumutarisa;Anobva aenda kurudyi, asi handimuoni. 10 Asi anoziva nzira yandakatora.+ Pashure pekunge andiedza, ndichabuda ndaita segoridhe rakanatswa.+ 11 Tsoka dzangu dzinonyatsotevera munotsika tsoka dzake;Ndinoramba ndichitevera nzira yake ndisingatsauki.+ 12 Handibvi pamurayiro wemiromo yake. Ndakachengeta mashoko ake+ kupfuura zvandaifanira kuita. 13 Kana achida kuita chimwe chinhu, ndiani angamudzivisa?+ Kana paine chaanenge achida kuita, anochiita.+ 14 Nekuti achaita zvese zvaakandirongera,Uye ane zvakawanda zvaakandirongera zvaachada kuita. 15 Ndokusaka ndichinetseka nemhaka yake;Pandinofunga nezvake, ndinowedzera kutya. 16 Mwari aita kuti ndishaye ushingi,Uye Wemasimbaose aita kuti nditye. 17 Asi handisati ndanyararidzwa nerimaKana kunyararidzwa nerima gobvu rakafukidza chiso changu.